Soomaalida Minnesota kunool oo loga digya in aysan jabin amarka dowlada - Awdinle Online
Soomaalida Minnesota kunool oo loga digya in aysan jabin amarka dowlada
Soomaalida kunool dalka Mareykanka gaar ahaan Gobolka Minnesota ayaa ka hadlay awaamiir horleh oo lagu soo rogay gobolkaas, kadib markii ay sii kordheen dadka uu haleelay Caabuqa Coronarisu.
Dadka ayaa laga mamnuucay in ay isagu tagaan goobaha oo ay kamid yihiin: Maqaayadaha laga cunteeyo, Xarumaha Jimicsiga, meelaha lagu fadhidiriro, Shineemooyinka iyo meel waliba oo ay ku kulmaan Bulshada.
Xildhibaan Maxamuud Nuur oo kamid ah Golaha Baarlamaanka ee Minnesota oo la hadlay Warbaahinta waxa uu Soomaalida ugu baaqay in aysan jebin amarrada lagu badbaadiyo fayaqabka bulshada.
“Dadka Soomaalidu waa in ay raacaan amarrada lagu xakameynayo Coronavirus ee kasoo baxaya maamulka Gobolka, sababtu waxaa loogu daneynayaa caafimaadkooda si aysan u qaadin caabuqa oo laga helay 54-ruux, halka 1800 ay ku jiraan xaalad karaantiil ah” ayuu yiri Xildhibaan Maxamuud Nuur oo katirsan Golaha Baarlamaanka Minnesota.
Xiildhibaanka waxa uu sidoo kale sheegay in qofkili dhaqangelin waayo amarrada in uu muteysan doono ciqaab lacageed dhan $1000 (Kun doollar) ama xabsi uu ku badalan doono.
Guddoomiyaha Gobolka Minnesota ayaa soo rogay amarrada cusub, kadib markii uu sii kordhay kiisaska Coronavirus, lana karaantiilay dad horleh oo lagu arkay calaamadaha caabuqa halka qaarkood laga shakiyay.
Mareykanka waxa uu kamid yahay dalalka saameynta taban uu ku yeeshay Coronavirus, waxaana madaxweynaha Dalkaas Donald Trump uu ku dhawaaqay qorshe wax looga qabanayo.
Previous articleDaawo Sawiro:- Dowladda Federaalka oo Diyaarisay Xarun lagu Hayo Dadka laga Helo Coronavirus
Next articleGolaha Wakiilada Somaliland Oo Loo Fasaxay Cudurka Coronavirus Dartiis